ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဘာကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ကြတာလဲ? ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်များ
Home adolescence ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဘာကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ကြတာလဲ? ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်များ
ဆေးလိပ်သောက်တာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်တွေအရ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဆေးလိပ်စွဲခြင်းက ဖြတ်ဖို့ ပိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အရက်သေစာနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်စားကြသော ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ဘဝတက်လမ်းတွေ ပျောက်ဆုံးနိုင်ခြေ ပိုများနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တွေက ဆေးလိပ်သောက်ရခြင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရာများ
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ရဲ့ အဆိုအရ နေ့စဉ်စီးကရက်သောက်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဆယ်ဦးမှာ ကိုးဦးက အသက် (၁၈) နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဆေးလိပ်သောက်ရခြင်းက ဒီလိုအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု (သို့) ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားတွေကြောင့် သောက်ကြတယ်
သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အရွဲ့တိုက်ပြီး သောက်ခြင်း
ဆေးလိပ်သောက်ရတာကို မိုက်တယ်(သို့) အထာကျတယ်ထင်သောကြောင့် သောက်ခြင်း
ဆေးလိပ် (သို့) ဆေးရွက်ကြီးရဖို့ လွယ်ကူသော ဒေသဖြစ်စေခြင်း
အသစ်အသစ်သောအရာတစ်ခုကို စမ်းသပ်ချင်ပေမယ့် လုံလောက်သော ရင့်ကျက်မှုမရှိခြင်း
ဆေးလိပ်မှာ ပါဝင်သော Nicotine က စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က မိခင်ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ကလေးဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာနိုင်ချိန်မှာ ဆေးလိပ်သောက်နိုင်ခြေပိုများခြင်း
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေခြင်း
လူမှုစီးပွားရေးနိမ့်ပါးသော ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် ပညာမတတ်သော နောက်ခံလူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များခြင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုအားနည်းခြင်း နှင့် self- image နိမ့်ကျသော ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ဆေးလိပ်သောက်နိုင်ခြေ ပိုများခြင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့် လိင်ပိုင်ဆိုင်းရာအနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကလည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်
မိဘနှစ်ဦးကွာရှင်းခြင်း(သို့) ချစ်ရသူတစ်ဦးဦးဆုံးရှုံးခြင်းရကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး ဆေးလိပ်သောက်နေသော လက္ခဏာများ
ဆေးလိပ်သောက်သော ဆယ်ကျော်သက်တွေက သူတို့ရဲ့ အဝတ်အစားတွေ၊ အသက်ရှူခြင်း၊ လက်တွေမှ ထွက်လာသော ပုံမှန်မီးခိုးနံ့ကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့သုံးသော စီးကရက်အပေါ်မူတည်ပြီး အနံ့ပြင်းထန်မှု ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သူရဲ့ လက်သည်းတွေနှင့် လက်ချောင်းတွေဟာ ဆေးလိပ်မီးခိုးနှင် ကတ္တရားစေတို့ကြောင့် အဝါရောင်အစွန်းအထင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေဟာ အပြာရောင်ဖြစ်လာနိုင်သလို အနက်ရောင်တွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သွားတွေက အပြင်ဘက်မှာ အဝါရောင်ပြောင်းပြီး အတွင်းဘက်မှာတော့ နီညိုရောင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
၃။ အပြင်ထွက်ရဖို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြခြင်း
ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ခဏတာအားလပ်ချိန်တွေမှာ အရင်ကထက် မကြာခဏအိမ်မှ ထွက်လာတတ်ကြပြီး ဆေးလိပ်သောက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၄။ နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် လွန်ကဲသော စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း
ပုံမှန်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အသံမထွက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းယားယံခြင်းနှင့် နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်က အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း (သို့) တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အရင်းခံအကြောင်းရင်းကို မညွှန်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင် ၎င်းက ဆေးလိပ်သောက်သော အလေ့အထဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအန္တရာယ်ကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
သင့်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေနှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အရက်သောက်ခြင်းတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်လို့ရပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ရိုးသားစွာ ဖြေပါ။ ကလေး အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ စကားစမြည်ပြောပါ။
သင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စီးကရက်သောက်ခိုင်းတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။ ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်တာမျိုးလည်း မဖြစ်စေပါနဲ့။ ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါ အလေ့အထကို လျှော့ချဖို့နှင့် ဖျောက်နိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
မိသားစုအတွင်း ဆေးလိပ်မသောက်ရ ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်သော လက္ခဏာတွေကို ကြိုလေ့လာထားပါ။
သားသမီးတွေရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်း ဖော်ရွေပါ။ သူတို့ကို Personal Space , Time ပေးပါ။
ဆေးလိပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မလွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတစ်ချို့ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောဆောင်အားပေးပါ။ တစ်ခြားသူတို့ အသက်အရွယ်ရှိ တစ်ခြားလူတွေဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေသော ဒေသတွင်း (သို့) အွန်လိုင်းပံ့ပိုးကူညီမှုအဖွဲ့တွေနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ သူတို့ကို ကျန်းမာသော အလေ့အထတွေကို ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်သော စေ့ဆော်မှုတွေကို ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
Previous articleမွေးကင်းစကလေးတွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်များ
Next articleသင့်ကလေးတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းမိနိုင်တဲ့ အကြောက်တရား (၅)ခု